Ndezvipi izvo zvakanakira Kuputika-chiratidzo Ruzha Uye Chiedza Maaramu?
Iyo yekushandisa renji yekuputika-chiratidzo kurira uye mwenje alarms iri kuwedzera yakafara uye yakafara. Chii chiri kukonzeresa mamiriro aya? Ngatitarisei. Mazuva ano, makemikari nharaunda ari kuramba achiwedzera kuomarara uye achichinja, uye chiyero chekuyera uye chiyero chekushandiswa kweexp ...
Stainless Simbi Kuputika-chiratidzo Distribution Bhokisi
Stainless Simbi Kuputika-chiratidzo Distribution Bhokisi Kuputika-chiratidzo mabhokisi izvozvi zvave kushandiswa zvakanyanya, uye munhu wese anotenga kutenga akaenzana mabhokisi, asi kutaura zvazviri, zvakanakisa kugadzirisa mabhokisi zvichienderana nemamiriro ako pachako. Munzvimbo zhinji, kushandiswa kwesimbi isina chinhu kuputika-chiratidzo distri ...
Nzira yekusarudza nekuisa Kuputika-chiratidzo Mwenje?
ne admin pane 21-08-06
Nzira yekusarudza nekuisa Kuputika-chiratidzo Mwenje? Marambi-ekuputika-marambi anoreva nzvimbo dzine njodzi senge dzinogona kupisa gasi nenzvimbo dzeguruva. Inogona kudzivirira mamwe magasi anopisa uye guruva rinokonzerwa nema arcs, sparks uye kwakanyanya tembiricha izvo zvinogona kuitika mukati memwenje, kuti zviite izvo zvinodikanwa o ...
Taiyi Kuputika-chiratidzo Series-TYMLED601 Kuputika-chiratidzo Mwenje
Taiyi Kuputika-chiratidzo Series-TYMLED601 Kuputika-chiratidzo Kuvhenekesa Matatu maitiro eTaiyi Energy ekuputika-chiratidzo zvigadzirwa: 1. Kudzivirirwa 2. Kuchengetedza magetsi uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza 3. Wide kushanda. ine jenareta ...
Mwenje Yekuputika-Uchapupu Inogona Kushandiswa Kupi?
Nhasi ndichataura newe nezvenzvimbo dzinofanirwa kushandiswa mwenje-yekupupura mwenje. Wati wamboona imwe nhau chaidzo? Semuenzaniso, chirimwa chemakemikari chakaputika, vashanu vakafa uye 1 vakakuvara, zvichingodaro. Zvinowanzo kukosha kuisa kuputika ...
Mashandisiro Ekushandisa Kuputika-chiratidzo Chibatanidza
Kutaura nezve "kuputika-chiratidzo chinobatanidza", munhu wese muindastiri anoziva nayo. Kune vazhinji vagadziri, vakadai saChengdu Taiyi. Kune mamwewo mazita akati wandei, akadai seanobatanidza, mapulagi, zvichingodaro. Kunyangwe ukandibvunza kuti sei uchindidana zvakadaro, unogona kungoti mas ...
Nyowani Chigadzirwa Kurudziro- LED Kuputika-chiratidzo High Bay Mwenje
Nyowani Chigadzirwa Kurudziro- LED Kuputika-chiratidzo High Bay Mwenje Mune ino nyaya, ini ndoda kuzivisa kwauri chigadzirwa chedu chitsva: LED kuputika-chiratidzo chakakwira bay mwenje. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzakasiyana dzine njodzi. Inofananidzwa nemagetsi ekuputika-chiratidzo, LED inopenya ...
Taiyi Ex-chiratidzo Series-TY / PLED502 Ex-chiratidzo Platform Chiedza.
Hunhu hweTaiyi kuputika-chiratidzo zvigadzirwa: 1. Kudzivirirwa, Kuchengetedza magetsi, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kushanda kwakawanda. 2. Iko goko rakagadzirwa nepamusoro-isingagadziriswe aruminiyamu chiwanikwa ne-imwe-nguva kufa-kukanda. Iyo yepamusoro inocheneswa neiyo-yekumhanyisa kupfura blasting uye yakakwira-voltage electrostatic spray ...
Ingori maminetsi matatu! Iwe unozodzidza maitiro ekuziva izvo zvakanaka nezvayakaipira zve LED kuputika-chiratidzo mwenje.
Kana uchitarisana nemhando dzese dzemhando uye nemitengo yakakwira kana yakaderera, vatengi vazhinji vanogona kusaziva kutenga uye kusiyanisa pakati pezvakanaka nezvakaipa. Pano, ndapfupisa mapoinzi mana evatengi kuvabatsira kuti vave nechokwadi chekutenga. 1. Iko kurongedza ...
Nzira yekusiyanisa kuputika-chiratidzo mwenje, mwenje wekuputika-chiratidzo uye akajairwa mwenje mwenje?
Ini ndinotenda kuti kana mutengesi achiramba achisangana nevatengi muindasitiri yekuputika-inogara ichisangana nemimwe mibvunzo yakaita seyoti "Chii chinonzi chiedza chekuputika? Chii chinonzi mwenje wekuputika-kwechiedza? L ...